Chii chinozivikanwa nezve maficha nyowani muFedora 29 | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Kugoverwa, Noticias
Fedora 29 ichave yazvino vhezheni ye2018 kubva kune inozivikanwa simba rekuparadzira mushandisi: Fedora. Pamusoro pekusunungurwa kweUbuntu 18.10, Fedora 29 ichave yakagadzirira kuburitswa kupera kwemwedzi uno, kana zvese zvikafamba zvakanaka.
Sekureva kwevashandisi vari kuyedza iyo nyowani vhezheni, Fedora 29 ingori yakabwinyiswa uye yakaratidza kugadzikana kukuru kunyangwe ichiedzwa panguva ino.
Kune avo vachiri kusaziva Fedora ndinogona kukuudza izvozvo iyi ngowani tsvuku based distro, Fedora ndeye general-chinangwa Linux kugovera kunoenderana neRPM.
Inozivikanwa nekuve yakagadzika sisitimu, iyo inochengetwa nekuda kwenzvimbo yepasi rose yeinjiniya, graphic vagadziri uye vashandisi vanotaura mabugs uye kuyedza matekinoroji matsva.
Fedora 29 iri kuunza shanduko zhinji, kunyangwe isiri huru kuburitswa.
Iko musanganiswa wakanaka wekupa yazvino uye makuru mapakeji vhezheni uye zvimwe zvinowedzerwazve, senge isina kudzima-isina boot chiitiko.
Vagadziri veFedora vakashanda pane yekutanga FPGA rutsigiro, Chiverengero chemidziyo yakadai seXilinx ZYNQ, senge Ultra96 96boards uye iyo Intel UP² yakavakirwa, iine maFPGA akavakirwa mukati.
FPGA maneja ndiweMutengesi asina kwaakarerekera masisitimu anga ari pamusoro penzvimbo kubvira 4.4.
Uku ndiko kutsigirwa kwekutanga kweFPGAs muFedora uchishandisa mutengesi yakazvimirira yakavhurika sosi maturusi.
Imwe yeshanduko huru yatove nekukurukurwa ndeyekuti iyi vhezheni itsva yeFedora 29 ichauya neiyo yazvino vhezheni yeGnome 3.30 desktop nharaunda.
Chiteshi chebasa Atomic ikozvino Fedora Silverblue. Iine kuwanikwa kwazvino kweCoreOS, chirongwa cheAtomic chiri kubatanidza uye Atomic Workstation yave kuzivikanwa seSilverblue.
Uyewo isu tinogona kuratidza kuti modularity iri kuwedzerwa kune yega yega vhezheni yeFedora pane kungova sevha chete, Pamusoro pekuvakwa kwePPC64 kuri kumiswa, iyo diki-endian musiyano (ppc64le) icharamba ichitsigirwa.
Iye zvino Fedora Scientific yakarongedzwa seIO chete, ichipa Vagrant bhokisi rinotendera vashandisi kuyedza uku kumonyoroka nyore.
Imwe poindi yakakosha, inogona kuenda isingazivikanwe nevamwe, ndeyekuti iyo GRUB menyu haizoratidzwe pane iyo system panongoiswa chete sisitimu yekushandisa.
Spins, marabhu, uye midziyo zvino zvinoshandisa VARIANT uye VARIANT_ID mu / etc / os-release panzvimbo peyakajairwa Fedora vhezheni.
Yehumwe hunhu hwatinogona kuratidza, tinowana zvinotevera:
NSS inotakura iyo p11-kit ma module nekumisikidza: Kana iyo NSS dhatabhesi yakagadzirwa, iyo PKCS # 11 ma module akagadziriswa muhurongwa p11-kit inozove yakanyoreswa otomatiki uye inoonekwa kune NSS kunyorera.
Sezvo zve tzdata-2018e, iyo yekumusoro chiteshi zvino ichave yakasarudzika kune yekucheka pacheji dhata fomati iyo inosanganisa yakasviba masikati masikati nguva inobvisa. Sekukanda kumashure, iyo 'kumashure' dhata fomati ichiri kuwanikwa muF28, F27, uye F26.
I686 inovaka izvozvi inosanganisira SSE2 rutsigiro nekutadza.
ZRAM rutsigiro rwema ARM mifananidzo: ZRAM inozokwanisa kuve inogoneswa yeARMv7 uye aarch64 kuchinjanisa kwemifananidzo yakagadzirwa-yekuvandudza mashandiro uye kuvimbika paARM imwechete bhodhi makomputa senge Raspberry Pi.
Mushure mekunge Red Hat yafunga kurega kushandisa BTRFS, Stratis yakasundidzirwa semhinduro nyowani yeZFS-senge mhinduro. Stratis ikozvino yasvika vhezheni 1.0 uye ichaverengerwa muFedora 29.
MySQL ichauya neshanduro 8.0.
OpenShift Chibvumirano chakagadziridzwa kuita vhezheni 3.10.
Iko kushandiswa kweOpenLDAP kuri kusundidzirwa kusiya kutsigirwa kweMozNSS
Hapasisina otomatiki Python kuunganidzwa: Iyo yazvino fomu ye otomatiki byte kuunganidzwa muPython kunze kwePython yakananga madhairekitori yakanyanyisa kukanganisa. Isu tinopa nzira yekuisa kunze uye nekugadzirisa iwo madhairekitori ekuda byte kuunganidzwa kwemafaira akadaro. Gare gare, maitiro ekare achasarudzwa-mukati chete.
Chekupedzisira tinogona kuwana kukoshesa kwePATH mushandisi, nekudaro tichichinja iyo PATH mushandisi ~ / .local / bin uye ~ / bin kuenda kune kutanga kwePATH runyorwa panzvimbo pekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chii chinozivikanwa nezve maficha nyowani muFedora 29
Iyo nyowani vhezheni yeKaOS 2018.10 yave kuwanikwa